Tilifoonadda caymiska ku jirey ee la dalbaday oo qaarkood qosol iyo yaab dhaliyeen | Somaliland.Org
Tilifoonadda caymiska ku jirey ee la dalbaday oo qaarkood qosol iyo yaab dhaliyeen
November 21, 2012	Shirkadaha waaweyn ee tilifoonadda gacanta ayaa maalin kasta waxay la kulmaan dhacdooyin cajiiba oo macaamiishooddu ka dalbadaan mag dhow ama bedelaad, kuwaasi oo macaamiisha caymiska ku jirtey ay sheegtaan dhacdooyin aad u dardarn oo lagu sheeggo wedka tilifoonka. Hadaba bal aan qaar ka midda dhacdooyinkaasi si korxaadisa uga soo qaadano ilaa dhowr ka midda kuwii ugu yaabka badnaa ee fajaca iyo amakaagga ku abuuray Mobile Insurance.co.uk, dhacdooyinkan xiisaha leh ee ay arkeen oo ay maalin kasta u dulqaadaan.
Hadaba sanadkii tegey ayaa shirkad ka midda shirkadahaasi u soo bandhigtay warbaahinta amuurtan oo qaarkood ay yahiin wax lagu qosolo ama laga xishooddo qaabka ay dadkaasi wax ku doonayaan ama ku qaateen.
1- Nin qodaala ama beeroolaa oo ku nool Devon ayaa ku andocooday ama sheegtay in tilifoonkiisii Iphone ka ahaa uu Sac uu ka dhalinaayey oo toosh uu kula foororey uu dabadda kaga dhacay oo halkaasi kaga lumay.
2- Gabadh ilaa 40 jira ayaa sheegtay in tilifoonkeeddii ay dubtey mar ay keeg dhalasho u dubeysey inanteedda xaflad ay lahayd.
3- Gabadh ilaa 30 jira ayaa sheegtay inay Eygeedda la lugeynaysey mar shinbir badeed ay si deg degga ugala boodey tilifoonkii Samsung Galaxy oo halkaasi ay kula tagtay shinbirtii tilifoonkii.
4- Gabadh 20 jira ayaa sheegtay in tilifoon Black Berry ah joojiyey gariirkii, mar ay u isticimaalaysey caruusad dadka waaweyn ah tilifoonkeedda.
5- Nin 30 jira ayaa sheegay in isaga oo beerta xayawaanka ee Safari Park wax kaga duubaaya tilifoonkiisa oo isla markaasina gaadhigiisa ku jira in Daayeer u soo dhuuntay oo kala boodey tilifoonkii, halkaasina uu kula tegey.
6- Nin dhismaha ka shaqeeya ayaa yidhi, mar aan musqusha galay oo surwaalka aan hoos isaga dhigaayey ayuu tilifoonkii iga dhacay markii aan xaajo dhamaystayna waan biyo raaciyey, markaa kadib ayaan ogaadey.
7- Gabadh ayaa sheegtay in tilifoonkii ay gidaarka ku dhufatay, mar ay isku xanaaqeen saaxiibkeed.
Hadaba dhacdooyinkan iyo qaar kale oo badan ayey la kulmaan shirkadaha waaweyn ee dadka uga adeegga dhinaca tilifoonadda gacanta, waxayna ka dhacaan ficilo kuwaasi u dhowdhowi dadka caymiska gawaadhidda ku jira ee ku nool dalalkan reer Yurub, in kasta oo dadkaasi ay noqonayaan kuwo khayru masuula oo aan macnaha iyo mihnadda daacadnimo iyo dadnimo aan fahansanayn gebi ahaanba, isla markaasina ku kaca khiyaamo iyo arimo bili-aadminimadda aad uga fog.
Previous PostGu’ga Carabta iyo Gabbal-Dhaca Israa’iilNext PostTababarahii naadigga Chelsea Di Matteo oo la eryey	Blog